२०२० को लागि शीर्ष १०० लाइफ उद्धरण - उद्धरण पीडिया
धेरै व्यक्तिहरू उनीहरू बाँच्ने वर्षहरूको गन्तीमा राख्छन्, तर त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन। यो महत्वपूर्ण छ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं ती बर्षहरू बाँच्नुहुन्छ र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ तपाइँ बस्नुहुने सबै वर्षहरूमा पर्याप्त जीवन छ।
कहिलेकाँही, हामी हाम्रो जीवनमा यति धेरै उतार-चढावहरू देख्छौं कि हामी ती चीजहरूको उज्यालो पक्ष देख्न छोड्दछौं। अवश्य पनि, चीजहरू तपाईको इच्छा अनुसार सबै समयमा हुदैनन्, तर तपाईले ती नकारात्मक कम्पनहरु लाई तपाईको सकारात्मकतालाई नष्ट गर्न दिनुहुन्न।
त्यहाँ विफलता पूरा जब त्यहाँ हुनेछ तर त्यो फेरि ठीक छ किनभने ती खराब समय तपाईंलाई आफ्नो जीवनको सबै भन्दा राम्रो पाठ दिन जानिन्छ। यस सन्दर्भमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं यस मार्फत जानुहुन्छ जीवन उद्धरण किनकि ती मद्दत गर्दछ तपाई भित्र पनी सकारात्मक भ्वाइस पुनः प्राप्त गर्न।
त्यस्ता भाइबसले तपाईंलाई फेरि चार्ज गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंलाई फेरि एकपल्ट बढ्दो बनाउँदछ र त्यसपछि तपाईंले प्राथमिक रूपमा गर्नु भएका सबै कार्यहरू गर्नुहोस्।
जीवन सधैं एकै पटक कहिल्यै जानु हुँदैन। जीवनमा, तपाई धेरै घटनाहरू भेट्नुहुनेछ जुन तपाईको इच्छा अनुसार भइरहेको छैन। जे होस्, त्यो ठीक छ र तपाईले आफ्नो तरिकाले चीजहरू समायोजित गर्न आवश्यक छ।
सबै तपाईको पक्षमा हुँदैन, तर तपाईसंग धेरै उदाहरणहरुमा छनौट हुँदैन। जीवनको ती सबै घटनाहरूमा जानु ठीक छ किनकि त्यसले तपाईंलाई तपाईंको जीवनका लागि पाठ दिन्छ। जीवनमा तपाईको अनुभव तपाईले बाटोमा आउने मुद्दाहरूको कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं पर्याप्त बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने, तपाईं चीजहरूमा टाँसिरहनुहुन्न जुन तपाईंको जीवनमा वास्तवमै धेरै फरक पर्दैन। अर्कोतर्फ, तपाईं जहिले जीवनका घटनाहरूबाट तपाईंको अनुभवहरू जम्मा गर्न विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंको भविष्यमा ती शिक्षाहरू समाहित गर्नुहोस्।
नराम्रो समय तपाईं दिनुहुन्छ तपाईंको जीवनको सबै भन्दा राम्रो पाठ, र यो यति धेरै छ कि तपाईं ती घटनाहरूबाट तपाईंको जीवनको पाठको अधिकतम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यी जीवन उद्धरण जहिले पनि तपाईंलाई ती प्रेरणाहरू फिर्ता लिन मद्दत गर्दछ जुन तपाईं सायद आफ्नो जीवनको अवरोधहरू पार गर्दै हिर्काउनुहुन्छ।
अवश्य पनि, यी कुरा सुनिश्चित गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं फेरि एकपल्ट ऊर्जाले भरिएर हुनुहुन्छ। साथै, तिनीहरू तपाईंलाई तयार हुनको लागि तयार गर्दछन् ताकि तपाईं आफ्नो कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जुन तपाईंको मार्गमा आउन बाँकी छ।
अन्तमा, यो तपाईको जीवनमा गणना गरिएको वर्षहरू होइन। यो तपाईंको बर्षको जीवन हो। - अब्राहम लिंकन
हामी हाम्रो उमेरलाई वर्षहरुमा गणना गर्छौं, होइन र? के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि यदि त्यो वास्तविक तरिका हो भने ...
मानिसलाई जीवनमा कठिनाइहरू आवश्यक पर्दछन् किनकि उनीहरू सफलताको आनन्द लिन आवश्यक छन्। - एपीजे अब्दुल कलाम
हामी मानिसहरुसंग खुशी मा दूर दूर एक प्रवृत्ति छ। यदि आनन्द पर्याप्त लामो समय सम्म रहन्छ, ...
NNeale डोनाल्ड वाल्श
जीवन तपाईको आराम क्षेत्रको अन्तमा सुरू हुन्छ। - Neale डोनाल्ड Walsch
हामी सबैको जीवनमा सपना र लक्ष्यहरू छन्। तर प्राय जसो हामी यो केहि देख्छौं द्वारा बाध्य हुन्छौं
अधिक तपाईले आफ्नो जीवनको प्रशंसा र उत्सव मनाउनुहुन्छ, त्यत्ति धेरै जीवनमा उत्सव मनाउन जान्छ। - ओप्रा विन्फ्रे
जीवन हामी सबैको लागि आशिष हो। यो एउटा अविश्वसनीय यात्रा हो जसको आफ्नै हिस्सा छ ...
आफ्नो जीवन बाँच्नुहोस् र आफ्नो उमेर बिर्सनुहोस्। - जीन पल
यदि तपाईं खुशीसाथ आफ्नो जीवन बिताउन चाहानुहुन्छ भने, आफ्नो उमेरको बारेमा नसोच्नुहोस्। तपाईंले विचार गर्नु पर्छ ...
जीवन अनमोल छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी यसको प्रत्येक बिट प्रयोग गर्छौं। उतार चढावहरू बीच, हामी ...
जहाँ जीवन तपाईं रोप्न, अनुग्रह संग खिल। - पुरानो फ्रान्सेली उखान
तपाईंको समय सीमित छ, त्यसैले कसैको जीवनमा यसलाई व्यर्थ नबनाउनुहोस्। - स्टीव रोजगारहरू
तपाईंको समय सीमित छ, त्यसैले कसैको जीवनमा यसलाई व्यर्थ नबनाउनुहोस्। डोमामा पासोमा नपर्नुहोस् -…
Gजर्ज बर्नार्ड श
जीवन आफैलाई खोज्ने बारेमा छैन। जीवन आफैलाई बनाउने बारेमा हो। - जर्ज बर्नार्ड शा
मानवको रूपमा, हामी असीमित विभिन्न प्रतिभा संग आशीर्वाद गरिएको छ। हामी सबैको आफ्नै बारे केही खास कुरा ...
तपाईको जीवनलाई प्रेम गर्नुहोस्। तपाईलाई मनपराउने जीवन बिताउनुहोस्। - बब मार्ली
जीवन एक आशिष् हो र हामी हरेक बितेको मिनेट मा यसको लागि आभारी हुनु पर्छ। यसले हामीलाई खोल्छ ...
कडा छनौट, सजिलो जीवन। सजिलो छनौट, गाह्रो जीवन। - Jerzy Gregorek
कडा छनौट, सजिलो जीवन! हो, कहिलेकाहीं तपाईंले आफ्नो जीवनमा कडा छनौट गर्नुपर्ला, तर ...
जहाँ प्रेम छ त्यहाँ जीवन छ। - महात्मा गान्धी
Cक्यामिला आयरिंग किमबल
तपाईले सुखी जीवन पाउनुहुन्न। तपाईं यसलाई बनाउनुहोस्। - क्यामिला आयरिंग किमबल
खुशी एक चीज हो जुन तपाईं साना चीजहरूमा पाउनुहुनेछ। र खुशी पाउन, तपाईं ...
एक महान दृष्टिकोण एक महान दिन हुन्छ जुन एक महान महिना हुन्छ जुन एक महान वर्ष हुन्छ जुन एक महान जीवन हुन्छ। - म्यान्डी हेल
ठूलो मनोवृत्ति विकास गर्न समय र प्रयास चाहिन्छ। जीवनका बिभिन्न परिस्थितिहरूले हामीलाई बिभिन्न आकारले अद्वितीय बनाउँछ।
मेरो जीवनमा मेरो लक्ष्य केवल बाँच्नको लागि छैन, तर फल्छ। - माया एन्जेलू
ठिक छ, हामी मध्ये धेरैले एक फिर्ता फिर्ता अनुभव बाँच्न रुचाउँछौं। हामी सोच्छौं कि शान्तिमय जीवन ...
यदि तपाईं जीवनमा के हेर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग जहिले पनि अधिक हुन्छ। - ओप्रा विन्फ्रे
जीवन तपाईले पाउनुहुने उत्तम शिक्षक हो। जीवन बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईलाई सबैभन्दा धेरै सिकाउँदैन…
यो हाम्रो जीवनमा के छ त्यो होइन, तर हामीसँग हाम्रो जीवनमा के छ त्यो गणना गरिन्छ। - जेएम लरेन्स
यदि तपाईं आफ्नो जीवनको आफ्नो चीजहरू र मानिसहरूसँग साझा गर्नुहुन्छ जुन तपाईंसँग साझा गर्नुहुन्छ -…